Archive du 04-avril-2022
Fifidianana 2023 Tena ho sahirana i Rajoelina
Herintaona sy tapany tsy hahatongavana amin’ny fifidianana Filoham-pirenena amin’ny 2023 isika amin’izao fotoana izao. Mitombina 90% fa mbola ho kandida ny Filoha am-perin’asa Andry Rajoelina.
Ho sarotra ny fandidiana ara-politika atsy ho atsy, ary betsaka ny ho diso fanantenana. Misoko mangina ny kajy politika avo lenta,
Famokarana “Mila fitaovana maoderina ny tantsaha”
Vahaolana haingana amin’ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny, hoy ny Kristianina mandinika raharaham-pirenena, Ralaiarimanana,
MBOLA RAJAONAH Fa inona moa izany no tsy hitsarana azy ?
« Tsy misy teny ahafahako maneho ny fihetseham-poko, rotidrotika ny foko. Mitomany aho mivavaka, miantso vonjy mba ho an’ny vadiko.
Vavatenina Maty main’ny herinaratra ilay ramatoa
Zava-doza no nitranga tao amin’ny amin'ny fokontany Anjiro, kaominina Anjahambe, distrikan'i Vavatenina, andro vitsy lasa izay.
Ambohijatovo sy Anosy Azo tsidihina amin’izay ny zaridaina vaovao
Nisokatra nanomboka tamin’ny faran’ny herinandro teo ny zaridainan’Ambohijatovo sy Anosy, izay hahazaka olona 70 sy 100 avy taorian’ny asa fanamboarana sy fanarenana natao taminy.
Nampiakatra saran-dalana tsy lera Nosamborina ilay mpamily sy ny mpanampy azy
Fitateram-bahoaka iray ao amin’ny zotra F mampitohy an'Ampefiloha sy Anjomakely no nampiakatra saran-dalana rehefa hariva ny andro.
Andranomena Nivadika ambony-ambany ilay taxi
Fiara karetsaka iray nitondra vazaha no nivadika teny amin’ny fiakarana misy Polisy eo Andranomena miazo an’Ambohibao omaly maraina .
Karama tsy voaray Miandry vahaolana ireo mpiasan’ny fandanjana fiara
Efa ho 3 volana hiditra 4 volana izahay tsy nandray karama, hoy ny fitarainana iray nataon’olona tsy nitonona anarana milaza azy ho mpiasan’ny toby fandanjana fiara ny sabotsy teo.
Kaominina Imito – Fandriana Mandray an-tanana ny fampandrosoana
Andro niavaka ho an’ny Vahoaka ao Imito ny zoma 1 aprily 2022. Notanterahina tamin’io Taombavao Malagasy io sady andro tsena ao an-toerana rahateo,
Loholona Michel Rakotondrainibe “Firenena 5 anjakan’ny jadona no miandany amin’i Rosia”
Ny 24 martsa teo dia nisy latsa-bato natao tao amin’ny firenena mikambana mba hampitsaharana ny herisetra any Okrainina, indrindra, ny herisetra ataon’I Rosia amin’ny sivily,
Rolly Mercia Amin’ny jona 2024 vao ho afa-bela
Ny jolay 2020 no nadoboka am-ponja ny Minisitry ny serasera teo aloha Atoa Harry Laurent Rahajason na Rolly Mercia. Nitsotra i Mamy Ravatomanga izay mpampiasa teo aloha fa tena nitory azy tokoa,
Ligin’ny lalao Echec Analamanga Tontosa ny tournoi "Ouverture Saison"
Tontosa ny sabotsy teo tetsy amin’ny IKM Antsahavola ny “tournoi Ouverture Saison” eo amin’ny taranja Echec ho an’ny ligin’Analamanga.
Fifandraisan-davitra Nizara loka ho an’ireo mpiara-miasa aminy ny Airtel
Nizara loka ho an’ireo mpiara-miasa akaiky aminy ny orinasam-pifandraisana Airtel. Tohin’ilay lalao nokarakarain’izy ireo nampitondrainy ny lohateny hoe :
Harena voajanahary Miha maro ireo mpitrandraka an-tsokosoko tratra
Tato anatin’ny herinandro dia maro ireo tranga fitrandrahana an-tsokosoko ny harena voajanahary tra-tehaka tany amin’ny faritra vokatry ny fanomezam-baovao avy amin’ny mpanome
Fanampiana noho ny loza voajanahary Nanolotra 5 tapitrisa dolara ny Amerikanina
Manome 5 tapitrisa dolara fanampiny ny Governemanta Amerikana ho an'olona 150.000 niharam-boina tamin’ny rivodoza.
C𝗛𝗥𝗗 𝗜𝗜 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗞𝗔𝗩𝗔𝗟𝗬 Nahazo milina mpamokatra herinaratra vaovao
Nahazo milina mpamokatra herinaratra vaovao ny CHRD II ao Manakavaly, distrikan'i Manjakandriana, Faritra Analamanga.
Fiarahamiasa Mifamatotra ara-tafika i Rosia sy Madagasikara
Mifamatotra ara-tafika I Madagasikara sy Rosia, raha ny voalazan’ny gazety vahiny iray nivoaka ny faran’ny herinandro teo. Nosoniavina ny 18 janoary ny fifanarahana ary nanomboka ny 25 martsa,
Antsohihy Nofaohan’ny kamio ireo mpivady nandeha moto
Vehivavy izay tra-doza tao Ambalabe Ouest ‚ any amin’ny distrikan’Antsohihy no namoy ny ainy tsy fidiny rehefa nivoaka harivariva niaraka tamin’ny vadiny nitaingina moto.
Fanofanana ny tanora sy ny orinasa Nitsangana ny “Arkasia Training”
Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy ny sabotsy lasa teo teny amin’ny Foibeny etsy amin’ny Immeuble OTIV Ankadindramamy ny “Arkasia Traning”,
Mpangalatra omby tao Andriatany, Iarinarivo Tafaporitsaka ny roa, saiky niharan’ny fitsaram-bahoaka ny roa hafa
Nofatoran'izy efadahy teo amin'ny tahon-goavy naniry ilay omby nangalariny ary lasa nisotro toaka tsy lavitra teo ry zalahy,
Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo Ankizy miisa 120.000 isan-taona no hisitraka Kapik’nakà
Miara-mientana isika manome vahaolana maharitra ho an'ny vahoaka, manome fanantenana ho azy ireo, manome asa ho azy ireo ary mifanome tanana amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo aty Atsimo,
Fianarantsoa Hiatrika fitsarana amin’ny 22 aprily ilay mpanolan-jaza
Hohenoina ampihibemaso ao amin’ny Fitsarana ao Fianarantsoa amin'ny 22 aprily ho avy izao ilay rangahy 38 taona nanolana zazavavy kely tsy ampy taona roa izay samy mianatra ao amin’ny EPP Mahazengy Fianarantsoa.
Ambositra Notolorana fanampiana ireo olona sembana
Nitsidika ireo ivon- toerana misahana ny zaza kamboty sy ireo olona manana fahasembanana tao Ambositra ny
Mbola hivarotra « maquette » ihany ve amin’ny fifidianana manoloana ity firenena mitotongana any amin’ny farahidiny ity? Mandeha ny fanambarana hiantsoana ny Filoha hirotsaka hofidiana indray.
Namaly ny fanenjehana azy ny QMM “Manaraka ny fenitra ara-tontolo iainana izahay”
Nanao fanambarana manohitra ny fanambarana ampahibemaso natao tato ho ato, ary mandà ireo filazana mifandraika amin’ny andraikiny amin'ny tontolo iainana ny ny Orinasa Rio Tinto QMM.